ကက်သလစ်လူငယ်များအတွက်သမ္မာကျမ်းစာအခန်းငယ် ၁၄ ခိုင်မာသောသိကောင်းစရာများ?
ငယ်ရွယ်ခြင်းနှင့်ဘုရားသခင့်အမှုတော်၌ပါ ၀ င်ခြင်းသည်အလွန်အဖိုးထိုက်သောအရာဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်အရာရာတိုင်းသည် ပို၍ ရှုပ်ထွေးပုံရသည်။ လူငယ်များသည်အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေသောကြောင့်၎င်းကိုသိရန်အရေးကြီးသည် ကက်သလစ်လူငယ်များအတွက်ကျမ်းပိုဒ် ငါတို့လိုအပ်တာတိုင်းငါတို့စွန့်ပစ်ခြင်းမှာရှိသည်။
သခင်ဘုရား၏အစေကိုခံရန်ဆုံးဖြတ်ကြသောလူငယ်များအတွက်ခွန်အား၊ အားပေးမှု၊ ဥပမာနှင့်အထူးတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက်များ။ ဒီကျမ်းချက်အားလုံးဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကျမ်းဂန်တွေထဲမှာပါရှိပြီးသူ့ကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းသိအောင်သူ့စကားလုံးကိုသိချင်စိတ်ပြင်းပြနေရမယ်။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်လူငယ်များကိုသူတို့၏သခင်ဘုရားထံလှည့်ကြည့်ရှုရန်လိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်များစွာသောအပြစ်များနှင့်ပြည့်နှက်နေပြီး၊ လောက၏အလိုဆန္ဒများ၌ပျောက်ဆုံးသွားပြီးဘုရားသခင်ထံသို့ချဉ်းကပ်ရန်အချိန်ယူပြီး၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်စေသောသူများသည်အလွန်နည်းပါးသည်။ ။
သင်ဟာဘုရားသခင်နဲ့ပိုရင်းနှီးချင်တယ်၊ လူငယ်တစ် ဦး ဖြစ်မယ်၊ မင်းဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုပြီးသားဆိုရင်၊ မင်းအတွက်အထူးစကားလုံးတစ်လုံးကိုရှာနေမယ်ဆိုရင်ဒီကျမ်းချက်တွေကသင့်နေ့စဉ်အတွက်များစွာအထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ်။
1 ၁။ ဘုရားသခင်သည်လူငယ်များကိုထောက်ပံ့သည်
3 ၃။ ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်များကိုယုံကြည်ပါ
4 ၄။ လူငယ်များသည်ဘုရားသခင့်အကူအညီကိုရရှိကြသည်
6 ၆။ ဘုရားသခင်သည်လူငယ်များအားအကြံပေးသည်
8 ၈။ ယုံကြည်ခြင်းနှင့်အတူအမြဲတမ်းလျှောက်လှမ်းပါ
9 ၉။ ခရစ်တော်၏တန်ခိုးတော်ကိုယုံကြည်ပါ။
11 ၁၁။ လိုအပ်ပါကဘုရားသခင့်အကူအညီကိုတောင်းခံပါ
12.1 ၁၃။ ဘုရားသခင်သည်မျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်သည်
1 ရှမွေလသည် 2: 26 သူငယ်ရှမွေလသည်ကြီးပွား။ ၊ ဘုရားသခင်ရှေ့၊ လူတို့ရှေ့မှာမျက်နှာရလေ၏။
ဤကျမ်းပိုဒ်၌ဗိမာန်တော်၌ကြီးပြင်းလာသည့်လူငယ်တစ် ဦး အကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားပြောထားသည်မှာအမေကသူမမွေးဖွားစဉ်ကဘုရားသခင့်ကျေးကျွန်တစ် ဦး အနေနှင့်ဘာဖြစ်မည်ကိုကလေးဘဝကတည်းကဘုရားသခင်နှင့်ရှမွေလအားပေးခဲ့သည်။ ငယ်ရွယ်စဉ်ကပင်ဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုရန်ဆုံးဖြတ်ကြသောကက်သလစ်လူငယ်အားလုံးအတွက်ပုံသက်သေ။
မဲ ၁၅: ၄ မိဘကိုရိုသေစွာပြုလော့။ အကြင်သူသည်မိဘကိုကျိန်ဆဲ၏၊
၎င်းကိုကတိက ၀ တ်ကိုဆောင်သောပထမဆုံးပညတ်အနေဖြင့်လူသိများသည်။ ၎င်းကိုလူငယ်များသာမကလူတိုင်းအတွက်ပြုလုပ်ထားခြင်းမှာစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်။ သို့သော်လူငယ်များသည်ခက်ခဲသောအဆင့်များမှဖြတ်သန်းသွားသောအခါလူငယ်များသည်ဤစကားလုံးနှင့်သင့်လျော်သည်။ ထို့နောက်သခင်ဘုရားသည်အကြံဥာဏ်များနှင့်ရှည်လျားသောအသက်တာကိုပေးမည်ဟုကတိပေးသည်။
မြည်တမ်းစကား 3:27 “ လူသည်အသက်ပျိုစဉ်အခါထမ်းဘိုးကိုထမ်းကောင်း၏။
ဘုရားသခင့်လူငယ်များသည်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေနိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ခွန်အားနှင့်စိတ်ဓာတ်ကရာနှုန်းပြည့်ပုံပေါက်သည့်အချိန်တွင်သူအား ၀ မ်းမြောက်စွာအမှုဆောင်ခြင်းက ၀ မ်းမြောက်သည်။ လူငယ်သည်ကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင့်ပညတ်တော်များနှင့်ယုံကြည်ခြင်း၏စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်များအောက်တွင်နေထိုင်ရန်မိမိကိုယ်ကိုပေးလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အချိန်တိုင်းကောင်းချီးခံစားရမည်။
၁ တိမောသေ ၄:၁၂ သင်၏လူငယ်များကိုသင်၏လူငယ်မဖြစ်စေပါနှင့်။ နှုတ်ကပတ်၊ အမူအကျင့်၊ ချစ်ခြင်း၊ ၀ ိညာဉ်၊
ငယ်ရွယ်စဉ်၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၌အမှုဆောင်လိုခြင်းသို့မဟုတ်ဘုရားသခင်အားစိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ပေးလိုခြင်းတို့အတွက်အကြိမ်များစွာပြောခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလေးအနက်ထားခြင်းမခံရဘဲဆန့်ကျင်လျက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချခြင်းခံရသော်လည်းဤနေရာတွင်သခင်ဘုရားသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအကြံဥာဏ်ပေးပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးအခေါ်ကိုယူရန်တိုက်တွန်းသည်။ ငယ်ငယ်ကတည်းကသူ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်
ဆာလံကျမ်း 119:9လူပျိုသည်မိမိသွားသောလမ်းကိုအဘယ်သို့သန့်ရှင်းစေနိုင်ပါမည်နည်းဟူမူကား၊ နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအားဖြင့်”
ကက်သလစ်လူငယ်နှင့်နှလုံးသား၏ယုံကြည်ခြင်းကိုကျင့်သုံးသူအားလုံး၏လမ်းကြောင်းသည်ညစ်ညူးစေသောကြောင့်မကြာခဏသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင်ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားမေးခွန်းတစ်ခုမေးပြီးသူ၏အဖြေကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းကိုရှင်းလင်းရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပါဌ်တော်ကိုစောင့်ထိန်းခြင်းဖြစ်သည်။
ယေရမိ ၁း၇-၈ တဖန်ဘုရားသခင်က၊ အကျွန်ုပ်သည်သူငယ်ဖြစ်ပါ၏ဟုမပြောနှင့်။ အကြောင်းမူကား၊ သင်ရှိရာသို့ငါသွားသောအခါ၊ သင့်ရှိရာသို့ငါစေလွှတ်မည်။ သူတို့ရှေ့မှာကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြနှင့်။
ကျွန်ုပ်တို့အသက်မည်မျှပင်ရှိပါစေ၊ ငယ်ငယ်ကပင်ဤမလုံခြုံမှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးများကိုလွှဲပြောင်းယူလိုပုံရသည်။ သခင်ဘုရားသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်နေရာတိုင်းတွင်အတူတကွသွားပြီးအရာရာကိုမှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်ရန်လမ်းညွှန်ပေးပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုခွန်အားပေးသည်။
၂ ကောရိန္သု ၆:၁၄ “ အရာရာတိုင်းဟာငါ့အတွက်တရားဝင်ပေမယ့်အရာအားလုံးဟာအဆင်ပြေပါတယ်။ အရာရာတိုင်းဟာကျွန်တော့်အတွက်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပေမယ့်အရာအားလုံးကိုတည်ဆောက်ပေးတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။
ဤကျမ်းပိုဒ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးလုပ်နိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့တွင်အလိုဆန္ဒရှိကြောင်းပြောရန်ဖြစ်သည် အင်အား ဒါကမကောင်းဘူးတောင်မှအရာရာတိုင်းကိုလုပ်ဖို့အဲဒါကငါတို့နဲ့မကိုက်ညီလို့လုပ်လို့မရဘူး။ ငါတို့ဟာကွဲပြားခြားနားတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါတို့ငယ်ငယ်ကတည်းကဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုဖို့သီးသန့်ထားခဲ့တာပဲ။
တိတု ၂း၄-၅ လူငယ်များသည်အမြော်အမြင်ရှိရန်လည်းတိုက်တွန်းသည်။ ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူမည်သည်ကား၊ သမာဓိရှိခြင်း၊ လေးနက်ခြင်း၊ ခိုင်မာသော၊ ပြည့်ဝစုံလင်သောစကားလုံးများကိုပြသရန်သင်ကြားရာတွင်ရန်သူသည်ရှက်ကြောက်ခြင်း၊
ကျွန်ုပ်တို့သည်လူငယ်များသာမကမည်သည့်အသက်အရွယ်တွင်မဆိုလိုအပ်ကြောင်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက်ဖြစ်သည်။ သင်မိတ်ဆွေတစ် ဦး ကို ရည်စူး၍ သို့မဟုတ်ဆွေမျိုးတစ် ဦး ကိုပေးနိုင်သောကျမ်းစာစာသား။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြုအမူသည်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းအတွင်းသာမကအပြင်၌မည်သို့ဖြစ်သင့်သည်ကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသည်။
သုတ္တံ ၃၁:၁၀ လူငယ်များ၏ဘုန်းသည်သူတို့၏အစွမ်းခွန်အားနှင့်အကြီးအကဲများ၏ဂုဏ်အသရေမှာအသက်ကြီးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
လူငယ်များသည်များသောအားဖြင့်အားအင်ပြည့်ဝကြပြီးသန်စွမ်းကြပြီးရဲစွမ်းသတ္တိရှိကြကာဘာမျှမကြောက်ဘဲသက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်သူတို့စွန့်ခွာသွားသောအရာသည်ကောင်းမွန်သောဘ ၀ အရည်အသွေးကိုခံစားရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးနှစ်များကိုသခင်ဘုရား၏အမှုတော်၌အပ်နှံသောအခါ၌သာဖြစ်နိုင်သည်။
၁ တိမောသေ ၄:၁၂ ထို့အပြင်နုပျိုသောကိလေသာများမှထွက်ပြေး။ ဆက်သွားပါ တရားမျှတမှုယုံကြည်ခြင်း၊ ချစ်ခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်း၊ သခင်ဘုရားအားကြည်ညိုသောစိတ်နှင့်ခေါ်ဆောင်သောသူတို့နှင့်အတူ၊
လူငယ်စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြမှုသည်အလွန်ပြင်းထန်သောရန်သူဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ထိုအရာကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်ရန်မတတ်နိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့ထံမှအချိန်တိုင်းရှောင်ကြဉ်ရမည်။ ဒီရေဒီယိုတွင်အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောအပြုအမူရှိခြင်းသည်မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်း၏အကြောင်းရင်းဖြစ်သော်လည်းဘုရားသခင်ထံမှဆုလာဘ်ကိုလူတို့ထံမှမဟုတ်ဘဲဘုရားသခင်ပေးသည်ကိုသင်သိကောင်းသိပေမည်။
Salmo 119: 11 ကိုယ်တော်ကိုမပြစ်မှားဘဲနေနိုင်မည်အကြောင်း၊ ဗျာဒိတ်တော်ကိုနှလုံးထဲမှာသိုထားပါပြီ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ငယ်ရွယ်သောနှလုံးသားကိုသခင်ယေရှု၏စကားတော်များဖြင့်ဖြည့်စွက်ခြင်းထက်ပိုကောင်းသောအရာမရှိပါ။ ဤစကားများကိုဘုရားသခင့်နှုတ်ကပါဌ်တော်၌တွေ့ရပြီး၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌နက်ရှိုင်းစွာသယ်ဆောင်ရန်အရေးကြီးသည်။ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုကျမ်းချက်များသို့မဟုတ်စကားများလိုအပ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့အားအပြစ်နှင့်ကင်းဝေးစေသည့်အပြင်ခွန်အားနှင့်ငြိမ်သက်မှုကိုပေးသည်။
6ဖက် ၅း၂၅-၂၆ သားသမီးတို့၊ သခင်ဘုရား၏အလိုတော်နှင့်အညီမိဘစကားကိုနားထောင်ကြလော့။ မိဘကိုရိုသေစွာပြုလော့။ ဤပညတ်တော်ကား၊
ကျွန်ုပ်တို့၏မိဘများကိုနာခံရုံသာမကဘုရားသခင်ကိုနာခံရန်လည်းဖြစ်သည်။ မိဘများကိုသင်နာခံသည့်အခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကန ဦး အပြုအမူဖြစ်သည်။ သူသည်ဘုရားသခင့်နှုတ်ကပါဌ်တော်ကိုပြည့်စုံစေပြီးသူသည်မိမိ၏ကတိတော်ကိုပြည့်စုံစေမည်။ မိဘစကားကိုနားထောင်ခြင်းသည်လျောက်ပတ်ပေ၏။
Salmo 71:5"အိုဘုရားသခင်၊ အကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ခြင်း၊။ "
ကျွန်ုပ်တို့သည်ယေဟောဝါ၏အမှုတော်ဆောင်ရန်မိမိကိုယ်ကိုမြှုပ်နှံပါက ပို၍ ကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသော၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသက်ပေးသော၊ အချိန်တိုင်းကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူလိုက်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုခြွင်းချက်မရှိချစ်သောဘုရားသခင်အားပေးသောဘဝကိုရရှိခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အကောင်းဆုံးသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်သည်။ သူငယ်ငယ်ကတည်းကငါတို့ရဲ့ခွန်အားနဲ့မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်ပါစေ။
ယောရှု ၁: ၇-၉ "ငါ့ကျွန်မောရှေမှာထားသောတရားအတိုင်းကျင့်မည်ဟုစောင့်ရှောက်ခြင်းငှါအားယူ။ အလွန်ရဲရင့်ခြင်းရှိလော့။ သင်ပြုလေရာရာ၌အောင်မြင်လိမ့်မည်။ သူ၏လက်ျာဘက်လက်ဝဲဘက်သို့မလွှဲမရှောင်ရကြ။ ဤပညတ္တိကျမ်းသည်သင်၏နှုတ်ကိုဘယ်တော့မျှမချန်မထား။ ကျမ်းစာ၌ပါသမျှအတိုင်းစောင့်ရှောက်။ ပြုစေခြင်းငှါ၊ သို့ပြုလျှင်သင်သည်အကြံထမြောက်။ အောင်မြင်လိမ့်မည်။ အား ယူ၍ ရဲရင့်ခြင်းသတ္တိရှိကြလော့။ မကြောက်နှင့်၊ စိတ်မပျက်နှင့်။ သွားလေရာရာ၌သင်၏ဘုရားသခင်ဘုရားသခင်ရှိသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။
အခက်အခဲများကိုရင်ဆိုင်ရန်သင်၏အစွမ်းခွန်အားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖြည့်ရန်ဖိတ်ခေါ်သည့်မျှမျှတတပြည့်စုံပြီးအထူးအကြံဥာဏ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြိုးစား။ သတ္တိရှိရမည်။ ငယ်ရွယ်သောကက်သလစ်ဘာသာဝင်များအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်ရမည့်စိန်ခေါ်မှုများစွာမှာဤကောင်စီသည်အင်အားတောင့်တင်းလာသည်။ ထွက်မသွားရအောင် ဘုရားသခင့်နည်းလမ်းတော်များ သူကငါတို့ကုမ္ပဏီပါ။
ဒီဆောင်းပါးကိုလည်းဖတ်ပါ အားပေးမှု ၁၃ ခု y ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်အခန်းငယ် ၁၁.
ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏ 11 ကျမ်းပိုဒ်